आणविक घडी, सब भन्दा सटीक जुन मान्छेले सिर्जना गरेको हो | नेटवर्क मौसम विज्ञान
समय, घण्टा, मिनेट, सेकेन्ड ... जो घडी एक हजार मा हेरेका छैन र दिन भर मा एक पटक ऊ ढिलो वा चाँडो एक भेट को लागी आउँछ भने हेर्न, तपाईं काम छोड्ने वा बस छोड्नुभएको कति हेर्न को लागी। तपाईंको साथीहरू वा परिवारसँग बारमा राम्रो समय बिताउँदा तपाईंको समय कति चाँडो हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यहाँ मानिसहरू छन् जसले घडीलाई सतर्क हुन अग्रिम गर्छन् र अन्य जो कहिँ ढिलो हुन्छन् किनकि तिनीहरू समयमा घडीमा हेर्दैनन्। तर पक्कै पनि तपाईंले आफैंको प्रश्न सोध्नुभएको छ, के त्यहाँ एक उत्तम समिकरण घडी छ जुन सबैका लागि ठ्याक्कै समय दर्साउँछ?
हो यो अवस्थित छ, र यसलाई भनिन्छ आणविक घडी। यो यस्तो घडी हो जुन काउन्टर अपरेटिंगले कार्य गर्दछ जुन आणविक अनुनाद वा कम्पन प्रयोग गर्दछ। यो मितिमा सबैभन्दा सटीक मानव निर्मित घडी हो। के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि यसले कसरी काम गर्दछ र यो कसरी बनेको हो? पढ्ने जारी राख्नुहोस् र यसका सबै रहस्यहरू जान्नुहोस्।
1 कसरी आणविक घडी काम गर्दछ
2 डाटामा समय परिवर्तन हुन्छ
3 आणविक घडीको महत्त्व
4 के हामीसँग एउटा ह्यान्डहेल्ड आणविक घडी हुन सक्छ?
कसरी आणविक घडी काम गर्दछ
हामीले माथि उल्लेख गरिसकेका छौं कि कुनै पनि समय लाई थाहा पाउनु तपाईंको दिन प्रति दिनको योजनाहरू र शान्त हुन आवश्यक पर्दछ। त्यसकारण, तपाईसँग दिनको समय राम्रोसँग जान्नको लागि राम्रोसँग सेट गरिएको घडी हुनुपर्दछ। प्रारम्भिक वा ढिलो हाम्रो लागि कुनै कामको घडी छैन। आणविक घडीको साथ यो हामीमा हुँदैन किनकि यो हो सबैभन्दा अचूक व्यक्तिले अहिलेसम्म सृष्टि गर्यो।
यदि हामी यसलाई परम्परागत मेकानिकल वाचसँग तुलना गर्छौं, जसले पन्डुलममा यसको संचालन आधार गर्दछ, यो भिन्न छ। पहिलो एक दोहोरोसँग काम गर्दछ जसले एक अर्कासँग सम्बन्धित गियरहरूको श्रृंखलालाई स्थिर ताल सेट गर्न सार्दछ जुन सेकेन्ड, मिनेट र घण्टा बित्छ भन्ने संकेत गर्दछ। यद्यपि, आणविक घडीले माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रमको क्षेत्रमा परमाणुहरूको ऊर्जावान भिन्नताहरूको आवृत्तिबाट काम गर्दछ।
यस घडीले मसेर भनिने सामग्री प्रयोग गर्दछ। विकिरणको उत्तेजित उत्सर्जनका लागि यो माइक्रोवेव एम्पलीफायर हो। यद्यपि यो जटिल देखिन्छ, यो सब भन्दा कमजोर सिग्नलहरूको बृद्धि गर्न र तिनीहरूलाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रमको माइक्रोवेभ फ्रिन्जमा रूपान्तरण गर्न सक्षम प्रणालीबाहेक अरू केही छैन। यो लेजर जस्तै हो।
यो मासेर रेडियो ट्रान्समिटरको साथ पम्प गरिएको छ 0,000000001 सेकेन्ड प्रति दिन आवृत्ति। यस पम्पि of को शुद्धता धेरै महान छ। यस कारणले गर्दा, जब रेडियो उत्सर्जक आणविक तत्त्वको विकिरणको भिन्नतामा आवृत्तिसँग मिल्छ, त्यस्ता आयनहरू रेडिएसन र उत्सर्जक प्रकाश अवशोषित गर्न सक्षम हुन्छन्। यी सबै स्थानहरू रेडियो तरंग उत्सर्जनको लागि धन्यवाद लिन्छन्।
डाटामा समय परिवर्तन हुन्छ
जब आयनहरूले विकिरण ग्रहण गर्छन् र प्रकाश उत्सर्जन गर्छन्, एक फोटोइलेक्ट्रिक सेलले ठीक त्यो क्षण समात्यो जसमा प्रकाश उत्सर्जन हुन्छ र सर्किटको माध्यमबाट मिटर जडान सुरु हुन्छ। काउन्टर रेकर्ड गर्न मा सक्षम हुन को आरोप मा टुक्रा हो अपेक्षित तरंग उत्सर्जन गर्न शुरू भएको संख्या।
आयन प्रकाश प्रर्दशनको समयको काउन्टरमा प्राप्त गरिएका सबै डाटा कम्प्युटरमा पठाइन्छ। यो हो जब रिसेभरलाई दालहरू पठाउन आवश्यक सबै कामहरू सम्पन्न हुन थाल्छन्। अन्त्य रिसीभरहरू ती हुन् जसले हामीलाई दृष्टिमा सहि समय देखाउँछन्।
विकिरण शोषण गर्न र प्रकाश उत्सर्जन गर्न प्रयोग गरिएको आइसोटोप सेजियम १ 133 हो। यो आइसोटोपलाई तताउन सकिन्छ ताकि यसले आफ्नो परमाणुहरू रिलीज गर्न सक्दछ र उनीहरूसँग विद्युतीय चार्जको साथ, खाली इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक क्षेत्रको ट्यूब मार्फत सञ्चालन गर्न सकिन्छ जुन फिल्टरको रूपमा काम गर्दछ ताकि केवल अणुहरू जसको ऊर्जा अवस्था चाहिन्छ मात्र त्यहाँबाट जान सक्दछ। ।
आणविक घडीको महत्त्व
निश्चित रूपमा तपाईले परमाणु घडीको बारेमा सोच्नु भएको छ संसारमा उत्तम परिशुद्धता पाउनको लागि र कहिले कहिँ ढिलो नगर्नुहोस्। जे होस्, यो अनुसन्धानको लागि यसको ठूलो सटीकताका साथ अभिव्यक्त गरिएको घडी हो। यो केवल रासायनिक प्रतिक्रियाहरूको समयको लागि वा प्रयोगहरू गर्नको लागि मात्र प्रयोग गरिदैन जहाँ समयलाई ध्यानमा राख्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण चर हुन्छ। यो जान्नको लागि धेरै उपयोगी छ समयको गतिमा अवस्थित भिन्नताहरू।
अहिले सम्म, एक सबैभन्दा पूर्ण र प्रख्यात प्रयोगहरू जसमा आणविक घडी प्रयोग गरिएको छ पृथ्वीको बिरूद्ध विपरित दिशामा विमानहरू पठाउनु हो। एक चोटि विमानहरू तिनीहरूको उत्पत्तिबाट प्रस्थान गरेपछि, घडी सुरु हुन्छ र दुबै आइपुग्नको लागि लाग्ने समय नापिन्छ। यो कसरी यो प्रमाणित हुन्छ विशेष सापेक्षता राख्छ। अर्को प्रयोग भनेको गगनचुम्बी भवनको तहखानेमा आणविक घडी राख्नु र अर्को छानामा अर्को बिच फरक देखाउन। यी प्रकारका प्रयोगहरूका लागि तपाईंलाई घडी चाहिन्छ जससँग ठूलो परिशुद्धता छ।
वर्तमानमा, यो आणविक घडी जीपीएस उपग्रहको गठनको लागि प्रयोग गरिएको छ जुन हामी हाम्रो स्मार्टफोन वा कारहरूमा प्रयोग गर्न प्रयोग गर्दछौं। त्यसकारण यी उपकरणहरूको समय धेरै सहि छ। देख्न सकिने बाट, यससँग प्रतिबन्धात्मक प्रयोगशालाको प्रयोग छैन, तर अप्रत्यक्ष रूपमा हामी सबैले प्रयोग गर्छौं।
के हामीसँग एउटा ह्यान्डहेल्ड आणविक घडी हुन सक्छ?
कसले निश्चित समय थाहा पाउँदा जताततै जानको लागि तिनीहरूको हातमा यत्तिको सटीक घडी लिन चाहँदैन। यद्यपि, आणविक घडीहरू कहिले पनि हाम्रो हातमा पुग्न सक्दैन। उनीहरूसँग ठूलो समस्या छ र यो त्यस्तो राम्रो परिशुद्धता पाउनको लागि हो धेरै स्थिर वातावरण र धेरै चिसो तापमान आवश्यक छ। यी वातावरणहरूमा मात्र आणविक घडीको सटीक परिशुद्धता अगाडि आउँदछ।
अर्कोतर्फ, हामी अहिले प्राप्त गर्न सक्ने घडीहरू तिनीहरू एकदम सही छन् र यो अनुमान गरिएको छ कि यो राम्रो बजार विकल्प छैन। यसको कम्पोनेन्टहरू र मर्मतसम्भारमा कठिनाईलाई ध्यानमा राख्दै, यो एक उच्च लागतको घडी हुनेछ र बजारहरूमा भाँडा बनाउँदैन। त्यहाँ बिक्री को धेरै संभावना छैन कि एक आणविक कलाई घडी गर्न संयन्त्र को विकास लाई प्रोत्साहित गर्दछ।
तपाई विश्वमा निरन्तर मानिसहरुलाई अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ जुन उनीहरूलाई आफ्नो पैसालाई के गर्ने थाहा छैन र हुनसक्छ यो समूहका मानिसहरु आफ्नो कलाई मा यति सटीक घडि को लागी एकदम उच्च मूल्य तिर्न तयार छन्। केवल भन्नको लागि कि उनीहरूसँग केहि अद्वितीय छ र अन्य व्यक्तिहरू भन्दा भिन्नै एक राम्रो बजार विकल्प हुन सक्छ।
हुनसक्छ यो, यो यस्तो प्रकारको घडी हो जुन विज्ञानको लागि अत्यन्त आवश्यक छ र त्यसले हामी बस्ने संसारलाई राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Ciencia » आणविक घडी